Onye na-ahụ maka ndị ọka iwu Spotify ka tọhapụrụ Apple
Onye na-ahụ maka ndị ọka iwu Spotify wepụtara ka ọ dị njọ megide Apple - BGR
By TELES RELAY	 On June 10, 2021
Ike imeghari ohuru, Herbert Smith si “resilient” nzọ…
Site na Senegal, Quebec na-aga n'ihu n'Africa - Jeune Afrique
Cameroon: Sonara, Electricité du Cameroun, Camtel… Gịnị kpatara IMF…
Dị ka nnukwu profaịlụ Egwuregwu Epic na Apple essai banyere n'izu nke atọ na Mọnde - ya na ndị isi Apple isi ugbu a n'isi, dịka onye bụbu onye isi ahịa ahịa Apple Phil Schiller - onye isi iwu nke Apple na-emegide onwe ya kpamkpam kpebiri na nke a ga-abụ oge zuru oke iji wepụta ihe megide iPhone onye mepụtara. . Isiokwu a mere n'ụdị ederede na Akwụkwọ akụkọ Wall Street, ka o dokwuo anya, ọ na-ewekwa ụfọdụ ebubo ndị ahụ metụtara asọmpi na ebubo ebubo omume agbụ nke a na-agbaghakwa na ikpe Epic Games n'ụlọ ikpe gọọmentị etiti na California.
Otuto, n'okwu a dị iche, dị n'etiti Apple vs. Spotify, na onye edemede nke WSJ okwu a bụ Horacio Gutierrez, Onye isi iwu nke Spotify. O zuru ezu ikwu, na, maka onye ọ bụla gbasoro ọrụ ya nke gunyere Microsoft na Microsoft tupu ya abanye na Spotify, ebubo ahụ na akwụkwọ ọ bipụtara na nso nso a na Apple bụ "onye na-eme ihe ike na-eme ihe ike nke na-eji ike ya eme ihe iji gbochie ndị asọmpi ya '. ịda ụda, nke ọma, bara ọgaranya nyere isi mmalite.
Oge kacha mma	Oge mbu 2021 mbu mgbawa: Ndi otu ndi otu nwere ike nweta Blink Mini ese foto maka $ 19,99 ugbu a!	Ndepụta nke ọnụahịa:34,99 $	Ahịa:19,99 $	Ị chekwaa:$ 15,00 (43%)
Dị na Amazon, BGR nwere ike ịnweta ọrụ	Zụrụ ugbu a	Dị na Amazon BGR nwere ike ịnata ọrụ
Can nwere ike ịgụ nkọwa ya zuru ezu, akpọrọ "Nanị ikpuru na Apple, " Ebe a. Ma buru ụzọ dọọ aka ná ntị, naanị ihe rere ure, nke rere ure banyere isiokwu a bụ oke iwe nke iwe na-emetụta ọtụtụ ụlọ ọrụ, Spotify gụnyere, ozugbo ha matara na iwu Apple dị mma, chere, Apple., Kama inye onyinye ụlọ ọrụ ndị na-erite uru site na usoro okike nke Apple.
Tupu m banye n'ime ya, ka m kwuo n'ihu, ọ bụ ezie na ọ gbasaghị ọtụtụ mmadụ - ọ bụ onye Apple apologist dere ya. Enwere m nsogbu na ngalaba ọtụtụ ụlọ ọrụ na enweghị nsogbu na iji onyinye asọmpi dị ka ihe ọzọ. Anọghị m ebe a ito ihe niile Apple na - eme, ya Podcasts ngwa bụ ezigbo ihe atụ nke ahụ. Adịghị m nnukwu ndị ahịa Podcast n'ụwa, ebe enwere naanị otu ngosi na m bụ onye na-anụ ọkụ n'obi, mana agbanyeghị, achọtara m ahụmịhe onye ọrụ nke ngwa Stitcher nyere. Dị elu karịa nke Apple. Ọ nweghị ihe ọ mere. Họrọ ihe kachasị mma maka gị wee ga n'ihu.
Ugbu a laghachi Okwu Gutierrez megide Apple, nke, dị ka anyị kwuru, na-abịa n'oge kwesịrị ekwesị dịka ọ na-etinye ụfọdụ n'ime otu okwu ahụ na Epic Games ikpe. Nke mbu, o kwughachiri ehi kwesiri ogologo nke Spotify megide Apple na Apple na-ewere oke 30% nke ihe ndi a choro n’ime ya dika ntinye ego nke ndenye aha. Nke abuo, “ndokwa ndị na-emegide Apple, nke dị n’ime iwu ọ na-enye ndị mmepe ngwa, na-egbochi ụlọ ọrụ ịnye ndị ahịa ụzọ ngwangwa maka ndenye aha ha kwụrụ ụgwọ yana site n’iso ndị ahịa kwukọrịta okwu.”
“Apple anaghị amanye nke ọ bụla n’ime njedebe ndị a na Apple Music, ọrụ ndị na-asọmpi ya site na Spotify. Ya mere ọ bụrụ na onye ahịa na-eji ngwa ngwa Spotify iPhone n'efu, ọ nweghị ike ịdenye aha na Spotify Premium na-enweghị akwụ ụgwọ Apple, na Spotify enweghị ike ịgwa ya ka ọ gaa na desktọọpụ ya maka azụmahịa ka mma na ekwentị.
Odi mma, kwusi. N'uche m, echekwara m na ọtụtụ mmadụ na-aghọta nke a ma ọ bụrụ na ha aghọtaghị ya - ọ bụrụ na ị banye n'ogige onye nwere mgbidi ma kwenye isonye. . Site na ịhọrọ isonye na ogige a a gbara ogige, ị gosipụtara nnọọ n'ụzọ nkịtị na enweghị ịdị adị nke otu egwuregwu, ma ọ bụ nke asọmpi na-asọ mpi! Lee otu ihe atụ. Ka anyị kwuo na ị kpebiri ịga leta m ebe a na Memphis, Tennessee, ma chọọ iri nri tupu anyị abịa. Nwere ihu ọma. Enwere ọtụtụ ụlọ nri dị ịtụnanya n'obodo ahụ, na-agbasa n'ogologo ya, na-enye ụdị nri niile na nri maka ọnụahịa niile ị nwere ike iche. Have nwere ọtụtụ nhọrọ. O doro anya na ọ bụghị ikpe na ụlọ oriri na ọ aụ restaurantụ ma ọ bụ ụlọ ahịa na-eme ka ndị mmadụ họrọ ebe a.
Ma ọ bụrụ na ị kpebie nke ahụ, ị ​​maara ihe ị ga - ahọrọ iri ebe a n'ụlọ, mụ na m, nke ahụ dịkwa mma. Mana ị ga - eme nhọrọ ahụ na ịmara na ị nọ na ebere nke ihe ọ bụla m debere ugbu a na shelf m na friji m. Onweghi onye mere ka ị hapụ nhọrọ niile dị na mpụga ịnọdụ ala na tebụl m ka mụ na gị rie nri, yabụ, abịakwala na-eti m mkpu na enwere ikpuru ikpuru na tebụl m, na-akpagbu ụlọ ọrụ gị ma gbochie gị ịhọrọ ihe ịchọrọ. iri nri.
Gutierrez, ụjọ, na-aga n'ihu na okwu ya na okwu ndị a:
"Spotify anọkwaghị naanị" iji dozie ụdị nkatọ a na Apple, ọ na - ekwu. Mana gịnị ka ọnụ ọgụgụ nke nyocha Apple dị? Kedu ka nke ahụ si dị mkpa? Ìgwè mmadụ nke nwere otu echiche n'ihe abụghị òtù ikpe na-adịghị ekpe ikpe na-adịghị na eziokwu nke ikpe. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, m ga-ekweta na Justin Bieber bụ onye omenkà pụrụ iche n'ihi na, ka emechara, ọtụtụ mmadụ na-azụ egwu ya. Ha aghaghi ima ihe m na amaghi!
Ọzọkwa, de Gutierrez: “Ike Apple nwere ịtụnanya ndị na-asọmpi ya bụ ụdị a na-enwetụbeghị ụdị ya. " Ọ bụ ya n'ezie? Ka anyị lelee ụfọdụ nọmba ngwa ngwa.
Ihe omuma ohuru na egosi Spotify nwere opekata mpe ọtụtụ ndị debanyere aha ndị debanyere aha karịa Apple Music.
N'oge Google I / O na Mọnde, Google Vice President of Product Management Sameer Samat ji nganga kwuo na e nwere ihe karịrị 3 ijeri ngwaọrụ gam akporo arụ ọrụ. Onu ogugu dikwa dika iPhone nke m huru bu 1 ijeri maka aka Apple.
Ebee n’ahịrịokwu abụọ gara aga ka ị ga - ahụ ihe akaebe na Apple, onye ọkpụkpọ pere mpe na ngwa egwu na ahịa ekwentị, “na-emejọ” asọmpi ahụ?
Enwere ike m na-esiri Gutierrez ike na ọ ga-enye ya uru nke obi abụọ. E kwuwerị, ọ bụ usoro Microsoft ochie onye tinyegoro onye nta akụkọ ma nyekwa ya nkuzi maka ezigbo elekere na etu 'ikikere ikike ikikere' dị. E nwekwara oge Google kwuru na Microsoft, mgbe ọ dara n'ọhịa nke smartphones, kpebiri ịgbanwe usoro na ịlụ ọgụ na ezé megide ndị ọrịa, n'okwu nke onye ọchụchọ ahụ, " buru ibu na ihe ndi ozo mezuru ma gbochie usoro ohuru. «
Ma nke ahụ bụ nyocha ziri ezi nke ihe na-eme na Microsoft n'oge ahụ, Gutierrez nọ n'etiti usoro ikike ikike ahụ. O doro anya na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ụkwụ nke ọzọ na nkwupụta ya megide Apple, ọ bụ ezie - kama ịsọ mpi n'egwuregwu larịị, ụmụ okorobịa a na-eme ka anyị maa jijiji maka ego ahụ! Ọ bụ nnọọ ikenenke!
Ọ bụ ọtụtụ ado banyere ihe ọ bụla. Enwerem onye ezinulom nke di ugbu a Spotify Premium debanyere aha. Ọ bụghị maka oge chere n'eziokwu ahụ na ndenye aha ahụ ga-eme site na ebe nrụọrụ weebụ Spotify ma enweghị ike ịme na iPhone. Ọ bụrụ na ngwaahịa gị dị mma, ndị mmadụ ga-eme ihe ọ bụla iji zụta ya na asọmpi ahụ. Na-eme mkpesa na ndụ adịghị mma bụ ihe ndị na-efu na-eme.
Oge kacha mma
Free Echo Dot na mgbe ịzụrụ $ 45 Ring Video Doorbell na ara ọgbụgba ụbọchị a!	Ahịa:Bụrụ $ 100, ugbu a $ 44,99
Edemede a pụtara izizi (na Bekee) na https://bgr.com/business/apple-vs-spotify-wall-street-journal-op-ed-about-competition-5926404/
TELES RELAY 52651 posts 1 comments
Nwanyị nwunye Armie Hammer na ụmụ ya kwuru na ọ dị mma n'ọdụ ụgbọ elu - ndị mmadụ
Euro 2021 - Euro 2021: Benzema dị ugbu a maka Germany-France - FOOT 01
Ike imeghari ohuru, the “resilient” nzọ nke Herbert Smith Freehills na…
Cameroon: Sonara, Electricité du Cameroun, Camtel… Why the IMF pin…
Sundance gafere mma agha na Cameroon na Congo - Jeune Afrique